Looking for Land - Any Price
Posted by Nay Thway Thit Aung
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၁၆၈ ရပ်ကွက် တရုတ်ကြီးလမ်းမတန်း မြေကွက်များရှိရင် ဝယ်လိုပါသည်
Nay Thway Thit Aung
Looking for Apartment - 2,000 Lakh
Posted by Ko Maung Oo
Downtown မြို့ထဲ အဝယ်​ရှိပါတယ်​ အခန်းကျယ်​ 1800sqft , Hallခန်း အလွှာနိမ့်​ ၊ ကားဂိတ်​နီး ဝယ်​သူရှိပါသည်​။ သိန်း ၂၀၀၀ သုံးမည်​ အိမ်​ရှင်​များ၊ အကျိုးတူ​ဆောင်​ရွက်​လိုသူများ ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါသည်​။ Messenger မှပို့​ပေးထားပါ။
Ko Maung Oo
Posted by ‎Kai Zar‎
East Dagon Township. ၁၂၁ .၁၂၂. ၁၂၃ ၁၂၄.၁၂၅. ၁၅၆. ၁၅၇. ၁၁၈ .၁၁၉ ၁၀၈. ၁၃၁.၁၃၂.၁၃၄.၁၃၃.၅.၆.၇ ၈.၉.၅၂.ရပ်ကွက်ရှိမြေကွက်များအထူးဝယ်ပါမည် အမှန်တကယ် ရောင်းချင်သူများဆက်သွယ်လိုက်ပါ ☎09974854003 ?09963280569 ☎09963323535 အင်းဝအိမ်ခြံမြေမှာမြေကွက်ဝယ်ခြင်သူများမြေကွက်ရောင်းခြင်သူများ ဝယ်သူရောင်းသူမိတ်ဆွေကြီးများမှအကျိုးဆောင်ခလုံးဝပေးရန်မလိုပါ
East Dagon Township. 132 .133.134. 123 .126 .125. 124 .118.119.108 136. 157. 155 .122.ရပ်ကွက်ရှိမြေကွက်များ ဝယ်လိုပါသည် အမှန်တကယ်ရောင်းချင်သူများဆက်သွယ်ပါ အိမ်အရောက်ငွေချေပေးမည် ?09974854003☎09963280569 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
Posted by Win Theingi
စမ်းချောင်း ဖျာပုံလမ်း၊ မြောင်းမြလမ်း၊ညောင်တုန်းလမ်း၊ ဗဟိုလမ်း၊ ဗားဂရာလမ်း၊ ကျွန်းတောလမ်း အလုံ ဗဟန်း ရန်ကင်း မြေညီ သိူ့ ပထမထပ် ပေကျယ်တိုက်ခန်း သိူ့ ကွန်ဒိုငှါးလိူသည်။ Gym ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၁၅သိန်း သုံးမည်။ ပိုင်ရှင်များ တိုက်ရိုက်အပ်နှံနိုင်သည်။ မိမိအခြမ်းမိမိယူ အကျိုးဆောင်များ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ 09450718749 Ever Light Real Estate
Looking for Apartment - 300 Lakh
Posted by Ma Ei
မြေညီ ထပ်အခန်း ဝယ်လိုပါသည် ဈေးနူန်း သိန်း၃၀၀ မကျော်တာလေး အကျယ် အဝန်း၁၂ ပေလဲရ ပါတယ် ရှင့် မြို့နယ်မရွေးပါ ပိုင်ရှင် တိုက်ရိုက် (သို့) အကျိုးဆောင်များ ဆက်သွယ် ပေးပါ ကျေးဇူးပါ ရှင့်09.780002960 မအိ ,09.893525409
Within Yankin & South Okkalapa Township. 1800နှင့် 2500 sqft ကြား ရုံးခန်းဖွင့်ရန် အတွက်Condoအခန်းဝယ် လိုပါ သည်။ရန်ကင်းမြို့နယ် ပို၍ ဦးစားပေးလိုပါသည်။ ကားပါကင်ပါရမည် ရေကူးကန် ဘာညာ ပါစရာ မလိုပါရှင့် ။ တဥက္ကလာဘက်ဆိုလျှင် သုမင်္ဂလာလမ်းမ မကျော် တာမျိုး ဝယ်ပီး ရုံးခန်း ဖွင့်ရန် အတွက် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရေကူးကန် မလို Gym မလိုပါ ရှင့် အဆင်ပြေပီး သင့်တော်သော ကွန်ဒိုအခန်း များ ရှိပါ က အမြန်ဆက်သွယ် ပေးပါ /အမြန်ဝယ်မည် အိမ်ရှင်များ လဲ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အပ်နှံ နိုင်ပါသည်။ အကျိုးတူ တခြမ်း 1% ဆီခွဲ၍ အဆင်ပြေသော မိတ်ဆွေ များလဲ ဆက် သွယ်နိုင်ပါသည် ရှင်။ မအိ ( အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်း ) 09.780002960 09.893525400
Looking for Land - 1,200 Lakh
Posted by Ma Kyawt
​မြောက်​ဒဂုံ ၃၀/၃၁/၃၂/၃၅/၃၆/၃၇/၄၁ ရပ်​ကွက်​များတွင်​ ​နေရာ​ကောင်း ​မြေကွက်​သီးသန့်​အမြန်​ဝယ်​လိုပါသည်​၊ ​ပေ (40 ✖ 60)​မြေသီးသန့်​၊ သိန်း▶1000 မှ 1200အထိ အသုံးပြုပါမည်​၊ ​​ရောင်းချ​လို​သော ပိုင်​ရှင်​/လူကြီးမင်းများအ​နေဖြင့်​.. ဖုန်းဆက်​၍​သော်​၎င်း/ Chat box မှ​သော်​၎င်း/ ရုံးခန်းသို့်လာ ​ရောက်​၍​သော်​၎င်း ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ ​မေမြန်းစုံစမ်း အပ်​နှံနိုင်​ပါ သည်​၊ မြို့နယ်​အစုံ....လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်​/ခြံ/​မြေ/ကွန်​ဒို/တိုက်​ခန်း/လုံးချင်း/​ (​ရောင်း/၀ယ်​/ငှါး) ကိစ္စအရပ်​ရပ်​များအား ယုံကြည်​စိတ်​ချစွာ ​မေးမြန်းစုံစမ်း အပ်​နှံနိုင်​​ပါ​သည်​ ဆက်​သွယ်​ရန်​ ☎ 09-452428660(Viber) 09-401426223 09-401426224 09-424466385 09-424466386(Viber) 09-447540650 09-447540651 09-972892504
East Dagon Township, 40 x 60 sqft ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ရပ်ကွက် အ၀င်အတွက် နေရာကောင်း အတွင်းလမ်းကျယ် ပိုကြိုက် ၃၀၀- ၃၅၀ သိန်း သုံးပါမယ်။ 09 421135813
Looking for Landed House - 800 Lakh
ပင်လုံဆေးရုံ or ပင်လုံ City Mart နား 40*60 ကို 700-800 ဝင်းကျင် ရနိုင်မလား ? အဝယ်တိုက်ရိုက်ပါ
Looking for Land - 700 Lakh
29. 34 . 35. 36 .41. 42 ဘက်တွေမှာ မြေကွက်သီးသန့်လိုချင်ပါတယ် 300 -400 ကြားသုံးပါမယ် edited - နေရာပေါ်မူတည်ပြီး 700 ထိသုံးနိုင်ပါတယ် အ၀ယ်တိုက်ရိုက်ပါရှင်
Looking for Land - 300 Lakh
North Dagon Township. 32 , 33 Award အိမ်မပါ (မြေသီးသန့်) လည်း ရပါသည် သိန်း ၂၅၀ နဲ့ ၃၀၀ ကြား ငွေနိုင်ပါသည် ဂရန် မူရင်း နဲ့သာ ဝယ်ချင်ပါသည် အကျိုးဆောင်များလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် 09699356474 ( ဝယ်သူတိုက်ရိုက်ပါ )
Posted by Ye Yint Kyaw
North Okkalapa Township. ပေ40×60 အဝယ်ရှိပါသည် ရောင်းချင်သော အိမ်ပိုင်ရှင်များ ဆတ်သွယ်ပေးပါ cb (or) 09952881825 ,ph 09685522612
Posted by Ma Cho Cho Lwin
တိုက်​ခန်းအ၀ယ်​...700သိန်း သုံးမည်​ သစ္စာလမ်း ရတနာလမ်း မိုး​ကောင်းလမ်း ရန်​ရှင်းလမ်း ကမ္ဘာ​​အေးဘုရားလမ်း ဦးချစ်​​မောင်​လမ်း သင်္ဃန်​ကျွန်း အဲ့လမ်း​တွေအနီးဝန်းကျင်​မှာတိုက်​ခန်းအ၀ယ်​ရှိပါတယ်​ ပြင်​ဆင်​ပီးအခန်းဖွဲ့ထား​သောအခန်း တိုက်​သစ်​ ဒုတိယထပ်​ထိရပါတယ်​ ​မြေညီမကြိုက်​ပါ Prize..700သိန်း 09792227408(အကျိုး​ဆောင်​ပါ) အကျိုးတူရပါတယ်​ Sat.Sunday လိုက်​ကြည့်​ပါမယ်​ အခန်းရှိရင်​​ပေးပါအုံး အကျိုး​ဆောင်​များနှင့်​အိမ်​ပိုင်​ရှင်​များဆက်​သွယ်​​ပေးကြပါ
Ma Cho Cho Lwin
Posted by Zar Chi Win
Ground Floor for buy/ rent Botataung Pagoda Rd, Strand Road Area 20'×60' Area 25'×50' Please Contact toး09760811737
Looking for Condominium - 6,000 Lakh
Crystal Office Tower for buy သိန်း ၆၀၀၀ အထိသုံးမည်။ ============================ အိမ်​ခြံ​မြေနှင့်​အ​ထွေ​ထွေအကျိုး​ဆောင်​လုပ်​ငန်းသို့ လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ် ၊ခြံ ၊​မြေ ၊တိုက်ခန်း ၊ ကွန်ဒို များအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံနိုင်ပါသည် ။ +95 9767005005
Looking for Apartment - 100,000 Lakh
Posted by ကိုသားကွီး
2zay north okkalapa sabaw ma py ya bl 3la kyouk 3theinapyat
Land area3Acre No3Main road Mingalardon Helgu Hmawbi Htauk Kyant ပုံစံ ၇၊ ၁၀၅ ကျပြီးမြေ Please contact to 09423555944